ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ဟိုအဝေးမှာ ငါးရက်တာ….”
ဘလော့ဂ်ဖတ် ပရိသတ်တို့ နေကောင်းရဲ့နော့။
ကျနော် တပတ်ကျော်ကျော်လောက် ပျောက်နေရခြင်းအကြောင်းကတော့ NUHမှာ ဆေးရုံတက်နေရလို့ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်ကျော်လောက်က ညနေပိုင်း အဖျားတက်နေရာက ဆေးခန်းသွားပြတယ်။ ဆေးခန်းက ပေးလိုက်တဲ့ဆေးမှာ ကျနော်နဲ့ မတည့်တဲ့ ဆေးတမျိုးပါတဲ့အတွက် အဖျားမပျောက်ရုံမက ယားဖုတွေပါ ခြေထောက်မှာ ပေါက်လာလို့ ဆေးရုံကို ပြေးရတယ်။ ဆေးရုံမှာ ငါးရက်လောက်နေပြီး အခုတော့ အဖျားပျောက်လို့ ဆင်းလာပြီ။ ဆေးအရှိန်မပြယ်သေးလို့ အယားကတော့ နည်းနည်းကျန်သေးတယ်။
ငယ်ငယ်က ကျနော်တို့ ပြောနေကျ “မိဘုယားရင်ကုပ်ကုပ်ရင်မယားဘူး” ဆိုတဲ့ စကားလေးတောင် သတိရမိတယ်။ ဒီလို ဖတ်ရတာပါ။ “မိဘု….ယားရင်ကုပ်… ကုပ်ရင်… မယားဘူး” လို့။ အဲဒါကို မသိတဲ့လူတွေက “မိဘုယားရင် ကုပ်ကုပ်ရင်” စသဖြင့် ဖတ်တဲ့အခါ အတော် ရယ်ရပါတယ်။
အဲ… အခု ကိုယ်တိုင် ကုပ်နေရတော့ မရယ်ရတော့ဘူးပေါ့။ နည်းနည်းတော့ ဇိမ်ရှိပါတယ်။ ကာတွန်းရွှေမင်းသားရဲ့ ဆင်းရဲသား ဆုတောင်းလိုပေါ့။
“ဒီ ဝဲကြော်တွေ မပျောက်ပါစေနဲ့ ဘုရား။ တပည့်တော်မှာ ဇိမ်ခံစရာဆိုလို့ ဒီဝဲကြော်တွေလေးတွေပဲ ရှိတာပါ” ဆိုတာလေ။
ငါးရက်လောက် ဆေးရုံပေါ်မှာရောက်နေတုန်း ဒစ္စကာဗာရီကလာတဲ့ အစီအစဉ်တွေ ကြည့်လိုက်၊ စာအုပ်ကလေးလှန်လိုက်လှောလိုက်၊ ဟဲဖုန်းပေါ်မှာ အင်တာနက်ကလေး ကိုင်လိုက် လုပ်ရင် အချိန်ကုန်သွားတယ်။ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်အပါအ၀င် မြန်မာဘလော့ဂ်တွေတော့ ဖတ်လို့မရခဲ့ဘူး။ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်မှာ ကွန်မင့်တွေ ကောင်းနေတယ် သတင်းကြားပေမယ့် မဖတ်ခဲ့ရဘူး။ အခု ပြန်လာမှ အတိုးချပြီး ဖတ်ရတယ်။ လာရောက်ဖတ်ရှုကာ ကွန်မင့်ရေးသားကြသူများ၊ အားပေးကြသူများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆေးရုံက ဆေးခွင့်ကို ဒီလ ၂၈ ရက်နေ့အထိတောင် ပေးလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် လူလည်း နေကောင်းနေပြီဆိုတော့ ဒီတပတ် အိမ်မှာ နားပြီးရင် နောက်တပတ်တော့ အလုပ်ပြန်စဖို့ စိတ်ကူးတယ်။ အလုပ်ကနေ နှစ်ပတ်တိတိ ကင်းကွာသွားတဲ့ သဘောပေါ့။
ဘလော့ဂ်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ပြန်ရေးသွားမှာပါ။ တွေ့ကြဦးမယ်လေ…. ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့။
Posted by ကိုပေါ on Monday, September 14, 2009
Nay Nay Naing said...
ကျန်းမာလာပြီ သိရလို့ဝမ်းသာပါတယ်။
Glad to hear that , your back to future.
ပျောက်နေပါတယ် မှတ်တာ ဆေးရုံတက်နေရတာကိုး။
အယား ကျန်သေးတယ်ဆိုလို့ အိမ်မှာ အစား သတိထား စားရမယ်ထင်တယ်နော်..။ ကျွန်မဆိုရင် ပုဇွန်၊ မှို စားရင် ယားချင်တဲ့ ရောဂါရှိတယ်..။
ဆေးရုံယူနီဖောင်းရောင်လေးက လှလှလေး... :D
ဆေးရုံက ခွင့်ပေးတာကလည်း နားဖို့ လိုအပ်နေလို့ ပေးတာဖြစ်မယ်ထင်တယ်..။ နေကောင်းပြီလို့ ကိုယ့်ဘာသာဆုံးဖြတ်ပြီး ရုံးပြန်သွားမလို့လား...ကိုပေါ..။
မှတ်နေတာ.. ဆေးမတည့်တာ ယားနာဖုလောက်ပဲ ဖြစ်လို့တော်သေးတာပေ့ါ။ ကျမ အမတုန်းက မျက်နှာတခုလုံးနီရဲ ယောင်အန်းပြီးသတိလစ်မတတ်ဖြစ်တာ၊
ချက်ချင်းအရေးပေါ်ပြေးပြီး ဖြေဆေးထိုးရတယ်။ သာမန်အားဖြင့်တော့ ဒီက ဆရာဝန်တော်တော်များများ ဆေးမပေးခင် ဆေးမတည့်တာဘာရှိလဲလို့ အမြဲမေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ လူနာကပဲမေ့ပြီး မပြောမိလို့လား၊ သူတို့ကပဲ မကျွမ်းကျွင်လို့လား မသိဘူးနော်၊ ကျမကတော့ဆရာဝန် ဆေးကုနေရင်းဖြစ်ဖြစ်၊ ဆေးစာရေးပေးနေတုန်း ဖြစ်ဖြစ် စကားအရမ်းပြောရင် လန့်တယ်။
ကိုယ်လဲစကားပြောရင်း အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ တခါတလေ အယောင်ယောင်အမှားမှားဖြစ်တတ်လို့ပါ။
နေကောင်းလာပြီဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ် ကိုပေါရေ။
၀ဲကလေး နဲ့ ဇိမ်သွားခံတာပေါ့..း) ကျန်းမာပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးရအောင်လဲ..ရောဂါ က.. မမည်.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်..ကျန်းမာပါစေ..ကိုပေါရေး)
mg kyi poae said...
အဆိုးထဲက အကောင်းဆိုရင် အနားယူခွင့်ရသွားတယ်လို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီ။ မြန်မြန်ကျန်းမာရေးကောင်းပါစေခင်ဗျာ။
မှန်မှန်ပြောကိုပေါ... ဆေးမှားလို့ ၀ဲပေါက်တာလား ကိုယ့်ဖာသာညစ်ပတ်လို့
September 14, 2009 at 5:59 PM
အခု ဆေးရုံကဆင်းရပြီဆိုလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်...
September 14, 2009 at 6:01 PM
ဆေးရုံတက်တယ်ဆိုလို့ ပိန်သွားမယ် မှတ်တာ..
အောရီချင်တယ် ပဲ ကိုး
September 14, 2009 at 6:53 PM
take care ko paw.
waiting for new post:)
September 14, 2009 at 7:20 PM
အကိုရေ အမြန်ဆုံး သက်သာပျောက်ကင်းပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးပါတယ်။ ကျနော့်က ကိုပေါ ခရီးသွားနေတယ် ထင်တား)
September 14, 2009 at 8:06 PM
ပျောက်လို့ ပျောက်မှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူး။ သူများတွေ ပျောက်တယ် ပြောမှပဲ ပျောက်မှန်းသိတော့တယ်။ post တွေ မတင်ပါလားလို့တော့ ထင်မိသား။
ဆေးရုံကို ကွန်ပျူတာတော့ ယူမသွားဘူး။
မမ KOM တော်တော်နောက်တာပဲ။
ဟင်....ဆေးရုံတောင်တက်လိုက်ရတာလား...။ နေကောင်းလာပြီဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ် ။
U should takearest . Take care . :)
ငှက်ပျောသီးသည် သလိပ်ကိုဖြစ်စေ၏၊ ယားယံခြင်းကို အားပေး၏ ဆိုလား.. မမှတ်မိပါဘူး။ ဆေးခွင့်လေးကတော့ အားရစရာပါပဲ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သက်သာပါစေဗျာ။
သြော် ဒါကြောင့်ကို လာလာချောင်းတိုင်း မတွေ့တာ... ဖတ်ရတော့မယ်ပေါ့ အသစ်တွေ... :)
September 14, 2009 at 11:14 PM
နားနားနေနေ နေပါဦးလေ ရတုန်းရခိုက်။
ဟား ဟား နာ့ တုန်းက လက်ပ်တော့ပါယူသွားတယ်
ကျန်မားလာပြီဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ် ပို့ စ်အသစ်တွေ
September 15, 2009 at 12:46 AM
September 15, 2009 at 1:26 AM
ဆေးရုံတက်တယ်ဆိုတာ သိတောင်မသိလိုက်ဘူး။ ပြန်သက်သာပြီး ခွင့်ရက်တွေ ရထားတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ ကျွန်မလည်း မအားလို့ မရောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အခုလည်း မအားသေးလို့ စာတွေနောက်မှ ဖတ်တော့မယ်။ ကိုပေါ ဆေးရုံတက်နေတဲ့ လူနာပုံက လူနာလို့တောင် မထင်ရဘူး။
September 15, 2009 at 5:54 AM
Dr. Yi Yi Win said...
ဒါနဲ့ ဘာဆေးတွေများမတည့်လို့ allergy ဖြစ်ရာတာပါလိမ့်။ အဲဒါသတိထားဗျို့ ။ အဲဒီမတည့်တဲ့ဆေးကိုမှတ်ထားပြီး နောက်ဆိုရှောင်ရမယ် (ဆရာလုပ်သွားသည်)။
September 15, 2009 at 8:26 AM
ညီမလဲ Sulphur ပါတဲ့ ဆေးသောက်ရင် အဲလိုပဲ။ Sulphur နဲ့ မတည့်ဘူး။ နောက်တခါ ဆရာဝန်နဲ့ပြရင် ပြောဖို့မမေ့နဲ့ပေါ့။ ဆေးခန်းပြနေတုန်း ဆရာဝန်ကို ကြည့်နေရင်းနဲ့ အိမ်ရောက်ရင် သူ့အကြောင်း ဘလော့ထဲမှာရေးမယ်လို့ တွေးနေလို့ ပြောဖို့မေ့သွားတာနေမှာပေါ့။ :) ခင်လို့စတာပါ။ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်နော်။
September 15, 2009 at 9:07 AM
သိတာနောက်ကျလို့ အခုမှ လာသတင်းမေးရတယ်...
အခုတော့ နေကောင်းသွားပြီ ဟုတ်...
kyan mar par say byar
KHIN ZIN MINN said...
during your absent , i think you was in trip.
Glad to hear that, you are well now. Takearest...
ကိုပေါရေ... ကျန်းမာလာတာ ၀မ်းသာပါတယ်။
September 15, 2009 at 8:21 PM
ကိုပေါကျမ်းမာလာပြီးဆေးရုံကဆင်းလာပြီသတင်းကြားလို့အရမ်းဝမ်းသာမိပါတယ်။အသိနောက်ကျလို့လာမတွေ့ဖြစ်တာကိုခွင့်လွှတ်ပါ။နားနားနေနေ နေပြီးမှစာတွေ ဆက်ရေးပါ။ ကိုယ့်ကျမ်းမာရေးကအဓိဘဲမဟုတ်လား။ ကျမ်းမာမှအရာရာကိုဆောင်ရွက်နိူင်မည်။ ကျမ်းမာ ချမ်းသာပါစေ။
September 19, 2009 at 3:02 PM